Baarlamaanka Hir-Shabeelle oo kulan ka leh Xildhibaanada Fadhiyada ka maqan. | Mustaqbal Radio
Home - Wararka Somalia - Baarlamaanka Hir-Shabeelle oo kulan ka leh Xildhibaanada Fadhiyada ka maqan.
Baarlamaanka Hir-Shabeelle oo kulan ka leh Xildhibaanada Fadhiyada ka maqan.
Guddiyada Baarlamaanka Hir-Shabeelle ayaa kulan ay shalay ku yeesheen Magaalada Jowhar waxa ay go’aamo kaga soo saareen sida laga yeelayo Xildhibaanada Fadhiyada aanan soo Xaadirin Cudur daar la’aan.
Waxa ay isla garteen in kulanka Baarlamaanka ee maanta ka dhacaya Magaalada Jowhar ay geeyaan tallaabooyinka iyo qodobada qabanaya Xildhibaanadaasi.
Xildhibaan C/qaadir Faarax Shuutaale oo kamid ah Guddi Hoosaadyada Baarlamaanka Hir-Shabeelle oo la hadlay Warbaahinta Mustaqbal ayaa u sheegay in Xildhibaanada laga sugayo ka go’aan gaarista Mudanayaasha maqan.
Marka laga soo tago Xildhibaano Howlo Caafimaad u maqan, waxa uu xusay in ay jiraan Xildhibaano aanan fasax ama Cudur daar laga heyn oo ku sugan Magaalada Muqdisho, kana maqan, fadhiyada Baarlamaanka.
Xeer Hoosaadkooda ayuu sheegay in uu qorayo Xildhibaankii Shan Maalin Soo daaho ay ka dhigan tahay in uu Maalin Maqnaa, halka Muddo dheer uu maqnaadana uu ku weyn karo Xasaanadiisa sida uu hadalka u dhigay.
Waa uu sii hadlay waxa uu sheegay in digniin ay qabaan Xubnaha maqan bilaa fasaxa, maadaama aanan wali dhicin in Xildhibaan Xasaanadda looga qaado maqnaashiyo ama lagu ganaaxin.
Mustaqbal ayaa weydiisay Xildhibaan Faarax in Xasaanad ka qaadista ay sababi karto isku dhacyo dhex mara Xildhibaanada, waxa uu ku warceliyey in aanan taasi u muuqan, maadaama Xildhibaanada ay Saxiixeen Xeer Ciqaabeedkaan Qabanaya.